Kooxda bambaanooyinka NYPD ayaa ku hareereysan agagaarka dhismaha UN -ka 'xirmo shaki leh'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Kooxda bambaanooyinka NYPD ayaa ku hareereysan agagaarka dhismaha UN -ka 'xirmo shaki leh'
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka Mareykanka
Kooxda bambaanooyinka NYPD ayaa ku hareereysan agagaarka dhismaha UN -ka 'xirmo shaki leh'.
Dhismuhu wuxuu hoy u yahay xarumo badan oo diblomaasiyadeed oo Turki ah oo ku yaal New York, oo ay ku jiraan hawlgal iyo qunsuliyad, wuxuuna kaloo martigeliyaa dhacdooyinka dhaqanka Turkiga.
Baakad laga shakiyay ayaa laga helay guriga Turkiga hortiisa ee magaalada New York.
Turk Evi (Guriga Turkiga) oo kaliya ayaa loo furay dadweynaha bishii hore.
Dhismaha ayaa hoy u ah xarumo badan oo diblomaasiyadeed oo Turki ah oo ku yaal New York.
Waaxda Booliska New York (NYPD) kooxda bambeyda ayaa la wacay markii baakad laga shakiyay laga helay guriga Turkiga hortiisa ee New York, meel u dhow Qaramada Midoobays dhismaha.
Booliska ayaa goobta looga yeeray abaarihii duhurkii xilliga maxaliga ah.
NYPD kooxda bambaanooyinka ayaa tan iyo markii ay banneeyeen aagga laba-baloog ku wareegsan dhismaha, oo ku yaal First Avenue ee Manhattan.
Turk Evi (Guriga Turkiga) oo kaliya ayaa loo furay dadweynaha bishii hore. Waxay ku taallaa xaafadda East Midtown ee safaaraddu ku culus tahay Qaramada Midoobay Plaza, waxay dhisnayd afar sano.
Waxaa kaloo jira guryo tiro badan oo ku yaal gudaha guriga.